झापामा सुत्केरी बोकेको एम्बुलेन्स अटो रिक्सामा ठोक्कियो, २ जनाको मृत्यु
बैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका २२ वर्षीय सुदिपको निधन
भोली शनिबार माता संकटाको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस
निर्वाचनका तयारीमा जुट्यो निर्वाचन कार्यालय
१४ गतेबाट खोप लगाउन शुरु
कंगनाको फिल्म ‘धाकड’ मा अर्जुन रामपालको फर्स्ट लुक
सामाजिक सञ्जालमा अभिनेत्री टिना दत्तका फोटा भाइरल
काठमाडौंको टोखामा टिपरको ठक्करबाट १७ वर्षका किशोरको ज्यान गयो
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नेपाली कांग्रेसमा दुईथरि मत छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच यस विषयमा मतभेद छ । विघटनको निर्णय असंवैधानिक बताएको कांग्रेसका सभापति किन निर्वाचनका पक्षमा छन् रु यस विषयमा यसअघिका शृङखलामा टिप्पणी गरिसकेका छौं । आजको शृङखलामा यसैसँग सम्बन्धित थप चर्चा प्रयास रहनेछ ।
देउवा निर्वाचनको पक्षका देखिनुमा सत्ता स्वार्थ रहेको हामीले यसअघि पनि चर्चा गरेका छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर सत्ताको लाभ लिने गरेको आरोप खेपिरहेको देउवाले पछिल्लो राजनीति राजनीतिक घटनाक्रममा पनि लाभ खोजिरहेका छन् । यस विषयमा ओली र देउवाबीच गोप्य सहमति भएको हुनसक्ने आशंका पनि गरिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनअघि ओली र देउवाबीच बारम्बार भेटवार्ता भएका थिए । यसैको परिणाम ओलीको असंवैधानिक कदममा देउवाको मौन समर्थन रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।
खासमा ओलीले देउवालाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री अफर गरेको समाचारहरु यसअघि नै सार्वजनिक भएका थिए । नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा सरकार बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको मत निर्णायक हुन्छ नै । देउवासहित मधेश केन्द्रित दलको साथ लिएर सत्तामा टिकी रहने ओलीको दाउ छ । यसका लागि उनी देउवालाई प्रधानमन्त्री दिनसमेत तयार रहेको बुझिन्छ । देउवाका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्छ ।
दाहाल–नेपालले पनि गरे प्रधानमन्त्री अफर
देउवालाई ओलीइतर समूह नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको छ । यसका लागि अहिलेदेखिनै सहकार्य गर्नुपर्ने समूहको प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने र पुनःस्थापित भएको अवस्थामा देउवालाई प्रधानमन्त्री ‘अफर’ समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र र माधव नेपालले गरेका हुन् ।
बुधबार साँझ दाहाल–नेपाल र देउवाबीच भेटवार्ता भएको हो । देउवा निवास बुढानिकण्ठ पुगेर प्रतिनिधी सभा विघटन विरुद्ध साझा मोर्चा बनाउनेदेखि पुनःस्थापनापछि सत्तासहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन् । देउवा र दाहाल–नेपालबीच ४० मिनेट कुराकानी भएको थियो। कुराकानीका क्रममा प्रचण्ड–नेपालले देउवालाई ओलीका आश्वासन र भ्रमबाट उम्किन सुझाएका थिए।
दाहाल र नेपालले ओलीको असंवैधानिक कदमको साझेदार बन्नुभन्दा बरु जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूहरूसँग सहकार्य गर्न देउवालाई आग्रह गरेक छन् । उनीहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर सँगै आन्दोलनमा जान पनि देउवालाई प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि वा नभए पनि प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई अफर गरिएको हो । देउवाले भने कुनै जवाफ नफर्काएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । देउवाले भने विगतमा आफूले धोका पाएको भन्दै अहिलेको प्रस्तावबारे पार्टीमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिती तय भएककाे छ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहिबार, माघ १, २०७७ १७:३६:५७
पञ्चक शुरु भएकोले गर्दा माघ ७ गतेसम्म यी पाँच कार्य नगरेकै राम्रो !
चरा झै उड्न जाने हैन त धुलिखेल ?
कपाल नबढेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? प्याजको प्रयोग गर्नुहोस !
खाना पारखीको लागि उत्कृष्ट रोजाई बन्दै कटिया हाउस !
रेनु दाहालले भनिन्, ‘केपी ओलीले हामीलाई सधै लखेट्नुभयो’
साथीमार्टको आक्रामक बिस्तार, ५ महिनामै काकारभिट्टा देखि धनगढीसम्म…
भाग्यमा नै राजयोग लिएर जन्मेका हुन्छन् यी ४ राशि !
अस्तव्यस्त जनजीवन, उपलब्धिविहिन शक्ति प्रदर्शन, आखिर कसले के पाए ?
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मिडियामाथि आरा चलाइस्यो, पत्रकारलाई नर्क पठाइस्यो’
बालबच्चा बोकेरै आन्दोलनमा
जोखिम कायमै: खोपको आसा र नयाँ भाइरसको चिन्ता
पौडेललाई ‘न्युट्रल’ राख्ने प्रयास :अब प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको नजर
प्रदेशहरु खारेज गरी, सय जनाको संसद र १० जनाको मात्रै मन्त्रिमण्डल बनाऔं
पहिलो चरणमा प्रदेश दुई, गण्डकी, लुम्विनी र सुदूरपश्चिममा निर्वाचन : प्रधानमन्त्री ओली
२५ वर्ष कान्छिसँग लगनगाँठो कस्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई (हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
बिस बोसको घरबाट आयो दुखद खबर : २४ वर्षे पिस्ताको दुर्घटनामा परेर निधन !